Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Waxqabadka heshiisyada Safarka iyo Dalxiiska ayaa kor u kacay 39.6% bishii Juun
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee qaybta safarka & dalxiiska ayaa muujiyay calaamado soo kabasho bishii Juun, ka dib hoos u dhac ku yimid bilihii la soo dhaafay.
74 heshiis ayaa lagu dhawaaqay waaxda socdaalka iyo dalxiiska adduunka intii lagu jiray Juun.
Dhaqdhaqaaqa waxqabadka wuxuu muujiyey horumarka suuqyada muhiimka ah oo ay kujiraan Maraykanka, Ingiriiska, Shiinaha iyo Jarmalka.
Hindiya waxaa ka dhacay hoos u dhac ku yimid howlaha heshiiska.
Wadar dhan 74 heshiisyo (oo ka kooban midaynno & soo-iibsi, sinnaan gaar loo leeyahay, iyo heshiis maalgelin maal-gashan) ayaa lagu shaaciyey waaxda socdaalka iyo dalxiiska adduunka intii lagu jiray Juun, taas oo ah koror dhan 39.6% in ka badan 53 heshiis oo lagu dhawaaqay bishii Maajo.
Dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee qaybta safarka & dalxiiska ayaa muujiyay calaamado soo kabasho bishii Juun, ka dib hoos u dhac ku yimid bilihii la soo dhaafay. Kordhinta waxqabadka heshiiska qaybta si xun ugu dhacday xirnaanshaha iyo xaddidaadda safarka iyadoo ay socoto COVID-19 faafa, waxay noqon kartaa calaamad wanaagsan bilaha soo socda.
Dhammaan noocyada heshiiska (oo hoos imanaya) ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaa kororka mugga heshiiska bishii Juun marka loo eego bishii hore. In kasta oo mugga heshiiska midowga & iibsigu uu kordhay 26.5%, tirada macaashka gaarka loo leeyahay iyo maalgelinta maalgelinta ayaa sidoo kale kordhay 9.1% iyo 137.5%, siday u kala horreeyaan.
Dhaqdhaqaaqa waxqabadka ayaa sidoo kale soo bandhigay horumar laga sameeyay suuqyada muhiimka ah oo ay ka mid yihiin US, ka UK, Shiinaha, Jarmalka iyo Isbaanishka, halka Hindiya ay ka dhacday hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqii heshiiska.